Naqshadeynta: Faa'iidooyinka iyo qasaaraha
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • WAXYAABAHA CAAFIMAADKA • Galmada iyo xiriirada »Masturaafka: faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Masturaafka: Dareenka iyo masruufka
ALEXIS WAYAN 27 February 2019
Dhamaanteen waxaan ku shaqeynay in ka badan hal mar nolosheena, raggii badi ahaan badankood laakiin tani maaha haweenka. Masturbate ayaa inooga badan annaga oo lagu yaqaan magaca "ahoco"Qofna qarsoon ma jiro. Dhalinyaro yar yar ah ilaa waayeelka, waxqabadkaas ayaa laga sii daayay jiilka illaa jiil, sidaas darteedna qofna kuma rumaysan doono haddii aad tiraahdo inaadan weligaa ku dhaqmin. qubeyska, sariirta iyo mararka qaarkood xitaa qolka fadhiga, maalin iyo habeenba waa wadnahayaga inaanu ku fekereyno ficilkan aan had iyo jeer amaan ahayn. Waxa ugu xiisaha badan ee ficilkan waa inaad hubiso inaad jacayl u sameyso qof aad jeceshahay, naftaada. Nasiib darro, sida xirfad kasta, masturbo wuxuu leeyahay saameyn wanaagsan iyo mid xun.
Waa kuwan sababo macquul ah oo lagu sameeynayo:
- wuxuu kor u qaadaa hurdo: Waxay u fiican tahay dadka ay ku adagtahay hurdada. Ragga ayaa sii daaya endorfin ka dib markii ay soo gaadheen orgasm oo u shaqeynaya sidii kiniinka hurda ee dabiiciga ah.
- waxay ka hortagtaa kansarka qanjirka 'prostate': Daraasado ayaa muujiyay in ragga ka sii da 'yar ee udhexeeya 20 iyo 50 inay yaraadaan halista ah inay qaadaan kansarka qanjirka' prostate '. Masturbalku wuxuu yareeyaa raasamaalka dheecaanka ah ee ku jira qiiqa prostatic ah. Daadinta dareerahaani waa hab dabiici ah oo ragga ah si toos ah ugu soo toosi karo sanduuqa markaad qoydo subaxdii.
- yaraynaysaa buufiska: Endorphins oo la sii daayay ka dib markii la soo gooyay orgto-yadu waxay hoos u dhigeysaa xaaladda dareen-celinta iyagoo keenaya nasasho murqo oo muujinaya dareenka nasashada.
- wuxuu hagaajiyaa galmada lab ah: Masturbalka waxaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo farxadkiisa kaas oo lahaan doona saameynta iska ilaalinta jahawareerka hore.
- waxay kicisaa nidaamka difaaca: marka aad nadiifiso jirkaaga wuxuu soo saaraa hormoon steroid la yiraahdo cortisol. hormoonkan ayaa xakameynaya nidaamka difaaca jirka wuxuuna kordhiyaa soo saarida unugyada dhiiga cad.
Sida wax walba oo wanaagsan, habeenkii fara badan. nacaybka:
- saameeyaa koritaanka: Si loo koro nin wanaagsan wuxuu u baahan yahay dhowr waxyaalood sida enzymes, proteins, lecithin, calcium, fosfooraska, glucosides, cusbada nafleyda, iwm. Spermatozoa waxa ku jira dhammaan walxahan, waxay sidoo kale ku jiraan DNA (deoxyribonucleic acid) iyo RNA (ribonucleic acid). In la riixo wiilka yar ayaa ka dhigaya walxahan jidhkiisa oo ka hortagaya inuu yeesho kobcin caadi ah sababtoo ah dhamaan waxyaabahan oo uu ku tirtiro waa runtii waxa uu u baahan yahay si loo horumariyo.
- waxay sababeysaa awood galmo: Waxaa jira xidid dhiig u gala xubinta taranka ee qofka. Dhaqdhaqaaq isdaba joog ah oo ku saabsan masturbay wuxuu keenayaa in si qalqal ah loo qalajiyo xididka. Sidaa daraadeed xubnaha waa inaysan si habboon u waraabin. Xuubka yar ee xididada dillaacsan ayaa la wareegaya, bararnaaya. Xaaladdani waxay keenaysaa maqnaansho la'aan iyo awood la'aan.
- saboolnimada shahwadaMarkaad nadiifiso, waxaad ka daadgureeysaa shahwad weyn oo ah shahwada iyo xad-dhaafka ah ee tijaabooyinka si loo buuxiyo saamiyada. Hase yeeshee, saamigaan si wanaagsan loo dhiso, waxay qaadataa kor u kicida tamarta, borotiinka iwm. Nasiib darro waxyaabahan ma aha kuwo ku filan si ay u daboolaan dalabkan xooggan. Sidaa darteed Spermatozoa laguma soo saarin tiro iyo tayo ku filan. shahwadu waa tayad liidata, caruurta masturbar fiican ma fiicna, waxay yeelan doonaan dhibaatooyin badan sababtoo ah waxay yihiin wax soo saarka abuurka aad u liita.
- ka sii daridda hawlaha imtixaanka: Doorka xiniinyaha waa in uu sameeyo shahwada, xajmiga badanaa wuxuu sii kordhiyaa waxqabadka tijaabada ah taas oo keeneysa waxqabadyo cilladaysan oo keeni karta mid dareen leh. SOURCE: XADGUDUB ME
Caafimaad qabta: MID KU TAHAY INAAD XAQIIJIN KARAA?